Maxay kawada hadleen Wakiilka UN-ka ee Somalia iyo madaxweynaha Somaliland-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maxay kawada hadleen Wakiilka UN-ka ee Somalia iyo madaxweynaha Somaliland-Sawiro
Maxay kawada hadleen Wakiilka UN-ka ee Somalia iyo madaxweynaha Somaliland-Sawiro
November 4, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan la yeeshay wefdi uu hogaaminayo ergayga gaarka ah ee xog-hayaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom kaas oo maanta gaaray magaalada Hargaysa ee caasimada Somaliland.
Kulanka labada dhinac ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimo ay kamid yihiin dib u bilaabista wadahadalka maamulka Somaliland iyo dowlada federaalka iyo nabad kusoo dabaalida deegaanada gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukaraq oo ay weli isku horfadhiyaan ciidamo ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire oo markii uu kulankaasi soo idlaaday warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in danjire Nicholas Haysom uu diyaar u yahay sidii loo soo celin lahaa wadahadaladii Somaliland iyo dowlada federaalka Soomaaaliya ka Somaliland ahaana dhankooda uu sheegay in ay diyaar u yihiin.
“Waxa laga wada hadlay dhawr arrimood oo muhiim ah oo ay ka mid tahay arrinta nabadgelyadu, is-kaashiga Qaramada Midoobay iyo Somaliland, arrimo la xidhiidha wada-hadalka Somaliland iyo Soomaaliya iyo amuuro kale oo labada dhinacba danaynayeen.”
Dhinaca kale qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka ee Howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu yiri sidan:
“ Wakiilka UN-ka,ee Somalia Nicholas Haysom, isagoo ku sugan Hargeysa,waxa uu la kulmay Madaxwaynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, oo ay kawada hadleen arrimo kala duwan oo ay ku jiraan, xiriirka dowlada Soomaaliya, amniga gobolka, horumarka iyo muranka kala dhaxeeya deriskoosa Puntland ee Tukaraq,” ayaa lagu yiri warka.
Nicholas Haysom oo dhawaan la wareegay xafiiska qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa wada booqashooyin uu ku tagayo magaalooyin maamul goboleedyada balse booqashadan uu maanta ku tagay magaalada hargaysa ayaan waxba soo kordhinayn marka la eego khilaafka dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada oo aan xal laga gaarin tiiyoo ay jirto in uu doonayo in dib loo bilaabo wada-hadaladii Dowlada Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.